हट गायिका रिहानालाई चाहियो कुमार केटो ! - Enepalese.com
हट गायिका रिहानालाई चाहियो कुमार केटो !
इनेप्लिज २०७२ असोज २७ गते ९:२९ मा प्रकाशित
एजेन्सी । हट गायिका रिहाना अहिले आफूनो लायकको पुरुषको खोजीमा छिन् ।
अमेरिकी टिभी च्यानललाई अन्तरवार्ता दिँदै रिहानाले सभ्य पुरुषहरुको बानी आफूहलाई मनपर्ने बताइन् । उनले आफू सभ्य पुरुषको खोजीमा रहेको अहिलेसम्म भेट्टाउन नसकेको बताइन् । ‘फीमेलफस्र्ट डट यूके डट’को रिपोर्ट अनुसार ‘बीच बेटर हेव माई मनी’ बोलको चर्चित गीतकी गायिका रिहाना यस्ता पुरुषमा आकर्षित हुन्छिन, जसमा ज्ञान होस र जो अलग-अलग भाषाहरु बोल्न सक्छ र केही उनलाई पनि सिकाउन मद्दत गरोस ।
टी मैगजीनसँग रिहानाको भनेकी छिन्- म सभ्य पुरुषहरुसँग आकर्षित हुन्छु । उनीहरु मलाई प्रभावित पार्छन् । उनीहरुमा कुनै डिग्रीको आवश्यकता छैन्, तर उनीहरुले अन्य भाषाहरु बोल्न जान्नुपर्छ वा दुनियाँका अन्य ठाउँका बारेमा जानकारी हुनुपर्छ वा फेरि कलाकार वा संगीतकार हुनुपर्छ ।’
२७ वर्षीय रिहाना अहिले सिंगल छिन् । उनले अहिले आफ्ना पुराना प्रेमीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर सभ्य, ज्ञान भएको प्रेमी खोजिरहेकी हुन् ।